Wattpad မှ ချစ်စရာ အခန်းဆက် ရိုမန့်စ် ဝတ္ထု (၅)အုပ် - For her Myanmar
Wattpad မှ ချစ်စရာ အခန်းဆက် ရိုမန့်စ် ဝတ္ထု (၅)အုပ်
ကိုယ်စွဲနေတာ အားမရလို့ သူများကိုပါ စွဲအောင်လုပ်တာ.. အက်ဒ်မင် အကျင့်ပုတ်တယ်နော် 😛
Wattpad ဖတ်တဲ့ ယောင်းတွေ ရှိကြလားဟင်? Wattpad ဆိုတာကတော့ စာရေးဝါသနာပါတဲ့သူတွေ ကလောင်သွေးတဲ့ နေရာလို့ ပြောလို့ရသလို စာဖတ်ဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက် ရတနာသိုက်လို့လည်း ဆိုလို့ရပါတယ်။ သူက Application လေးတစ်ခုပေါ့နော်… ဒီ App ထဲမှာ နာမည်ကြီးလှချည်ရဲ့ဆိုတဲ့ အခန်းဆက် ဝတ္ထုပေါင်း များစွာ ရှိသလို ဝတ္ထုတိုတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။ ဝတ္ထုအမျိုးအစားတွေလည်း အများကြီးဆိုတော့ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အမျိုးအစားကို ရွေးဖတ်လို့ ရပါတယ်။
အက်ဒ်မင်တော့ Xian Xia (တရုတ်ကျင့်ကြံခြင်းလောက ဇာတ်လမ်းလို့ ခေါ်ရမလားမသိ ဟီးဟီး ) တွေ၊ BL (Boys’ Love – ကောင်လေးနှစ်ယောက်ကြားက ဇာတ်လမ်း) လေးတွေ ကြိုက်တတ်တော့ Wattpad က အက်ဒ်မင့်အတွက် ရတနာသိုက်ကြီးပါပဲ။
တချို့ကျတော့လည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Idol တွေကို ဇာတ်ကောင်ထားပြီး စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်း ရေးဖွဲ့တာမျိုးလည်း ရှိပါတယ်။ နောက် ကိုယ့်ဟာကိုယ် စိတ်ကြိုက်ဝတ္ထုရေးကြသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အခန်းဆက်တွေတော့ များတာပေါ့နော်… ကလေးဖတ်လို့ရတဲ့ ဝတ္ထုကစလို့ လူကြီးဖတ် ဝတ္ထုတွေထိ အများကြီးပါပဲ။ ဆိုတော့ ကလောင်သွေးချင်တဲ့ ယောင်းယောင်းတို့အတွက်ရော၊ အပျင်းပြေ ဝတ္ထုတွေ အများကြီး ဖတ်ချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက်ရော ဒီ app လေးက အတော်အဆင်ပြေတယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ App က ဒီလို ပုံလေးနဲ့နော်…
ဆိုရင် App အကြောင်း သိသွားပြီဆိုတော့ အက်ဒ်မင်ခုတလော အရမ်းသဘောကျနေတဲ့ ဝတ္ထုလေးတွေကို ပြောပြမယ်နော်… ပုံမှန် ရိုမန့်စ် ဝတ္ထုလေးတွေပေါ့လေ…
၁။ Final Boss is No Joke
ဒီဝတ္ထုရဲ့ အဓိက ဇာတ်ကောင်က မိန်းကလေးပါ။ (မင်းသားတော့ ပါတာပေါ့နော် 😀 ) နာမည်က ရှီရှန်းတဲ့… သူက စာရေးဆရာမပါ။ သူ သေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာ သူ့ဝိဉာဉ်က တခြားဝတ္ထုတွေထဲရောက်ပြီး သူဝိဉာဉ်ဝင်ပူးလိုက်တဲ့ ဇာတ်ကောင်ရဲ့ ဆန္ဒတွေ System ကပေးတဲ့ Hidden Quest တွေ ဖြည့်ပေးရတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးပေါ့.. ရှီရှန်းက များသောအားဖြင့် ဗီလိန်လုပ်တာများတယ်.. ဇာတ်လိုက်တို့အတွဲကို လိုက်နှောင့်.. သူ့လာထိရင် ဇာတ်လိုက်သော ဘာသော နားမလည်ဘူး.. အကုန်အသေပဲ ဆိုတာမျိုး… သူလည်း အသေခံရတယ် 😀 သဘောကျစရာပေ့ါနော်.. Arc တစ်ခုချင်းစီမှာ ဇာတ်လမ်းတစ်မျိုးချင်းစီမို့ အတိုလေးတွေမှ ဖတ်ချင်တာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်လည်း ကွက်တိကျမှာပါ။ Arc တစ်ခုကို ပျမ်းမျှ အပိုင်း (၂၀) လောက်ရှိတတ်ပါတယ်။
Related Article >>> ကလိမထိုးခဲ့သော ဟာသအချစ်ဝတ္ထုလေး (၂)အုပ်
၂။ Pick the Second Male Lead
ဒါကျတော့ ရှီရှန်းလိုပဲ System တစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကူးတာ… ဒီထဲက ဇာတ်ကောင် ကောင်မလေး နာမည်ကိုတော့ မပြောထားဘူး.. Arc တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အရံဇာတ်ကောင်နာမည်တွေနဲ့ချည်း ပုံဖော်သွားတာပေါ့… နာမည်အတိုင်းပါပဲ… ဒုတိယ ဇာတ်လိုက်မင်းသားရဲ့ အချစ်ကို ရအောင်ယူရတဲ့ ဇာတ်လမ်းမျိုးပေါ့… မိန်းမမာယာတွေ မနည်းမနော တွေ့ရပါလိမ့်မယ်.. ပြီးတော့ Arc တိုင်းကလည်း ကြေကွဲစရာ အဆုံးသတ်မျိုးတွေဆိုတော့ Happy Ending – ပျော်စရာ အဆုံးသတ်မှ ဖတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ ယောင်းတို့တော့ တစ်ပိုင်းလောက် နမူနာဖတ်ကြည့်ပေါ့လေ 😉
၃။ The Rebirth of the Malicious Empress
နိုင်ငံရဲ့ စစ်အင်အားကို ကိုင်ထားတဲ့ စစ်သူကြီးရဲ့သမီး၊ ဒါပေမဲ့ ဝမ်းကွဲအစ်မတွေရဲ့ စကားအတိုင်းနေတဲ့ ခပ်တုံးတုံး သမီးပေါ့… မထင်မှတ်ဘဲ ဘုရင့်သားကိုကြိုက်မိပြီး အာဏာလုပွဲမှာ ဒီမင်းသားကို နန်းတင်ပေးခဲ့ပြီး သူကိုယ်တိုင် ဧကရီ ဖြစ်ခဲ့ရင်းကနေ နောက်ဆုံး သူ့အိမ်တော်က မိသားစုတွေ အကုန်လုံးကို သတ်၊ သူ့ကိုပါ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေဖို့ ဖိအားပေးခံရရင်း သူ့အသက်နဲ့ရင်းပြီး ချစ်ရတဲ့ ဘုရင်ကို စိတ်နာ၊ နောက်ကျောကို ဓားနဲ့ထိုးခဲ့ကြတဲ့ အစ်မ ဝမ်းကွဲတွေကို နာကျည်းပြီး သေဆုံးသွားခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး… သေဆုံးသွားပြီးကာမှ ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်းနဲ့ ဒီဖြစ်ရပ်တွေ မဖြစ်သေးခင် အချိန်လေးမှာ ပြန်ဝင်စားမိတဲ့အခါ သူဘယ်လို လက်စားချေမလဲ၊ သူ့ကံကြမ္မာကို ဘယ်လိုပြောင်းလဲမလဲဆိုတာလေးပါ.. ပလန်ချတာလေးတွေက အတော်စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်။
၄။ Doomed to be Cannon Fodder
ဒါကျတော့ ဝတ္ထုဖတ်နေရင်း တန်းလန်းကနေ ဖတ်နေတဲ့ ဝတ္ထုထဲ ရောက်သွားပြီး ကိုယ်က ဗီလိန်ဖြစ်နေလို့ မသေအောင် ကြိုးစားရတဲ့ ကောင်မလေး.. ကွကိုယ် မသေအောင် ကြိုးစားရင်း ဇာတ်လိုက်မင်းသမီးကို ကြိုက်ရမယ့် ဇာတ်ကောင်တွေ ဇာတ်လိုက်နဲ့ ဒုတိယမင်းသား၊ နောက် တခြား ဝတ္ထုထဲမှာ ခဏလေးပဲ ပါတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကပါ သူ့ကို အတည်ကြိုက်လာတဲ့အခါ… အယ်လယ်.. ဒါမျိုးပေါ့.. ဆိုးတော့ မဆိုးပါဘူးရယ်.. (သိပ်မကြိုက်ပေမဲ့လည်း ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးမို့)
Related Article >>> ကမ္ဘာကျော် နာမည်ကြီး ဟယ်ရီပေါ်တာ ရုပ်ရှင်တွေက မူရင်းဝတ္ထုတွေနဲ့ ဘာကွာသွားလဲ?
၅။ Poison Genius Consort
ဒါကကျတော့ ဒီဘက်ခေတ်က အဆိပ်မှာ အရမ်းကျွမ်းကျင်တဲ့ ဆရာဝန်မလေးက ဟိုဘက်ခေတ်ကို ရောက်သွားတာပေါ့နော်… သူ့ဝိဉာဉ်ဝင်သွားတဲ့ ကောင်မလေးရဲ့ အိမ်က အတော်ဆုံးဆိုတဲ့ သမားတော်ကြီးရဲ့ အိမ်တော်ပေမဲ့ သူကကျတော့ ဘာမှမသိ၊ ဘာမှမတတ် ၊ မျက်နှာမှာ ရုပ်ဆိုးတဲ့ ဒဏ်ရာကြီးနဲ့ မိန်းကလေး.. ဆရာဝန်မလေး အဲဒီကို ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ရုပ်ဆိုးမလေးက မင်္ဂလာဝေါထဲ ရောက်နေပြီ..
တကယ့်တကယ် အဲဒီကောင်မလေး မျက်နှာက ဒဏ်ရာက အဆိပ်ကြောင့်ဖြစ်နေတာမျိုး.. ကုလို့ ပျောက်နိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့ မူရင်း ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်ရှင်က ဘာဆေးပညာ၊ အဆိပ်ပညာမှ မတတ်ဘူးဆိုတော့ မကုခဲ့ဘူး ဖြစ်နေတာ.. ခု ဝိဉာဉ်အသစ်ကကျတော့ အဆိပ်ပညာမှာ ဆရာတစ်ဆူဆိုတော့ ဝေါထဲမှာတင် ကုလိုက်တာ ပျောက်သွားရော :3 နောက်ထပ် သူရှေ့ဆက်ရမယ့် လမ်းမှာလည်း ရန်သူပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ဆိုတော့ သူဘယ်လို ဆက်ပြီး ရင်ဆိုင်မလဲ၊ သူ့ရဲ့ အဆိပ်ပညာက သူ့အတွက် အထောက်အကူဖြစ်လာမလား၊ ကံဆိုးမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရမလား ဆိုတာတော့…. ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော် 😀 ဒီဝတ္ထုဆို ဒရာမာပါ ထွက်ထားပြီးသား.. “Legend of Yun Xi” ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ရှာကြည့်လို့ ရပါတယ်လို့…
ဒီဝတ္ထုတွေကို အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင် Wattpad မှာ ဒီနာမည်တွေနဲ့ ရှာကြည့်လို့ရသလို Google မှာလည်း ရိုက်ရှာလို့ ရပါတယ်နော်.. မြန်မာလိုလည်း Wattpad မှာ Arc အလိုက် ဘာသာပြန်ထားပေးတာတွေ ရှိပါတယ်။ Link ပေးဖို့ကျတော့ Wattpad မှာ မြန်မာလို ဘာသာပြန်ထားတာတွေက Arc အလိုက်ဆိုတော့ ပေးရခက်လို့ပါ.. တချို့ဆို အက်ဒ်မင်တောင် ရှာမရဘူး ဟီးဟီး.. ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အင်္ဂလိပ်လို ဖတ်စေချင်တယ် ယောင်းတို့ရေ… ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတာကို ဖတ်ကြည့်ရင်းနဲ့ ဖတ်ကျင့်ရသွားသလို အင်္ဂလိပ်စာလည်း ကောင်းလာတာပေါ့နော်..
ခု အက်ဒ်မင်ပြောပြသွားတဲ့ ဝတ္ထုတွေအကုန်လုံး Normal တွေချည်းပါပဲနော်.. တကယ်လို့ BL လေးတွေ ဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ေ်တာ့ ကွန်မန့်မှာ လာတောင်းကြပါလို့.. နောက်ထပ်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်နဲ့ ပြောပြပေးပါ့မယ်လို့စ်… မွချိနော်..
ကိုယျစှဲနတော အားမရလို့ သူမြားကိုပါ စှဲအောငျလုပျတာ.. အကျဒျမငျ အကငျြ့ပုတျတယျနျော 😛
Wattpad ဖတျတဲ့ ယောငျးတှေ ရှိကွလားဟငျ? Wattpad ဆိုတာကတော့ စာရေးဝါသနာပါတဲ့သူတှေ ကလောငျသှေးတဲ့ နရောလို့ ပွောလို့ရသလို စာဖတျဝါသနာပါတဲ့သူတှအေတှကျ ရတနာသိုကျလို့လညျး ဆိုလို့ရပါတယျ။ သူက Application လေးတဈခုပေါ့နျော… ဒီ App ထဲမှာ နာမညျကွီးလှခညျြရဲ့ဆိုတဲ့ အခနျးဆကျ ဝတ်ထုပေါငျး မြားစှာ ရှိသလို ဝတ်ထုတိုတှလေညျး အမြားကွီးပါပဲ။ ဝတ်ထုအမြိုးအစားတှလေညျး အမြားကွီးဆိုတော့ ကိုယျကွိုကျတဲ့ အမြိုးအစားကို ရှေးဖတျလို့ ရပါတယျ။
အကျဒျမငျတော့ Xian Xia (တရုတျကငျြ့ကွံခွငျးလောက ဇာတျလမျးလို့ ချေါရမလားမသိ ဟီးဟီး ) တှေ၊ BL (Boys’ Love – ကောငျလေးနှဈယောကျကွားက ဇာတျလမျး) လေးတှေ ကွိုကျတတျတော့ Wattpad က အကျဒျမငျ့အတှကျ ရတနာသိုကျကွီးပါပဲ။
တခြို့ကတြော့လညျး ကိုယျကွိုကျတဲ့ Idol တှကေို ဇာတျကောငျထားပွီး စိတျကူးယဉျ ဇာတျလမျး ရေးဖှဲ့တာမြိုးလညျး ရှိပါတယျ။ နောကျ ကိုယျ့ဟာကိုယျ စိတျကွိုကျဝတ်ထုရေးကွသူတှလေညျး ရှိပါတယျ။ အခနျးဆကျတှတေော့ မြားတာပေါ့နျော… ကလေးဖတျလို့ရတဲ့ ဝတ်ထုကစလို့ လူကွီးဖတျ ဝတ်ထုတှထေိ အမြားကွီးပါပဲ။ ဆိုတော့ ကလောငျသှေးခငျြတဲ့ ယောငျးယောငျးတို့အတှကျရော၊ အပငျြးပွေ ဝတ်ထုတှေ အမြားကွီး ဖတျခငျြတဲ့ ယောငျးတို့အတှကျရော ဒီ app လေးက အတျောအဆငျပွတေယျလို့ ဆိုရမှာပါ။ App က ဒီလို ပုံလေးနဲ့နျော…
ဆိုရငျ App အကွောငျး သိသှားပွီဆိုတော့ အကျဒျမငျခုတလော အရမျးသဘောကနြတေဲ့ ဝတ်ထုလေးတှကေို ပွောပွမယျနျော… ပုံမှနျ ရိုမနျ့ဈ ဝတ်ထုလေးတှပေေါ့လေ…
ဒီဝတ်ထုရဲ့ အဓိက ဇာတျကောငျက မိနျးကလေးပါ။ (မငျးသားတော့ ပါတာပေါ့နျော 😀 ) နာမညျက ရှီရှနျးတဲ့… သူက စာရေးဆရာမပါ။ သူ သဆေုံးပွီးတဲ့နောကျမှာ သူ့ဝိဉာဉျက တခွားဝတ်ထုတှထေဲရောကျပွီး သူဝိဉာဉျဝငျပူးလိုကျတဲ့ ဇာတျကောငျရဲ့ ဆန်ဒတှေ System ကပေးတဲ့ Hidden Quest တှေ ဖွညျ့ပေးရတဲ့ ဇာတျလမျးမြိုးပေါ့.. ရှီရှနျးက မြားသောအားဖွငျ့ ဗီလိနျလုပျတာမြားတယျ.. ဇာတျလိုကျတို့အတှဲကို လိုကျနှောငျ့.. သူ့လာထိရငျ ဇာတျလိုကျသော ဘာသော နားမလညျဘူး.. အကုနျအသပေဲ ဆိုတာမြိုး… သူလညျး အသခေံရတယျ 😀 သဘောကစြရာပေ့ါနျော.. Arc တဈခုခငျြးစီမှာ ဇာတျလမျးတဈမြိုးခငျြးစီမို့ အတိုလေးတှမှေ ဖတျခငျြတာဆိုတဲ့သူတှအေတှကျလညျး ကှကျတိကမြှာပါ။ Arc တဈခုကို ပမျြးမြှ အပိုငျး (၂၀) လောကျရှိတတျပါတယျ။
Related Article >>> ကလိမထိုးခဲ့သော ဟာသအခဈြဝတ်ထုလေး (၂)အုပျ
ဒါကတြော့ ရှီရှနျးလိုပဲ System တဈခုနဲ့ တဈခုကူးတာ… ဒီထဲက ဇာတျကောငျ ကောငျမလေး နာမညျကိုတော့ မပွောထားဘူး.. Arc တဈခုခငျြးစီရဲ့ အရံဇာတျကောငျနာမညျတှနေဲ့ခညျြး ပုံဖျောသှားတာပေါ့… နာမညျအတိုငျးပါပဲ… ဒုတိယ ဇာတျလိုကျမငျးသားရဲ့ အခဈြကို ရအောငျယူရတဲ့ ဇာတျလမျးမြိုးပေါ့… မိနျးမမာယာတှေ မနညျးမနော တှရေ့ပါလိမျ့မယျ.. ပွီးတော့ Arc တိုငျးကလညျး ကွကှေဲစရာ အဆုံးသတျမြိုးတှဆေိုတော့ Happy Ending – ပြျောစရာ အဆုံးသတျမှ ဖတျခငျြတယျဆိုတဲ့ ယောငျးတို့တော့ တဈပိုငျးလောကျ နမူနာဖတျကွညျ့ပေါ့လေ 😉
နိုငျငံရဲ့ စဈအငျအားကို ကိုငျထားတဲ့ စဈသူကွီးရဲ့သမီး၊ ဒါပမေဲ့ ဝမျးကှဲအဈမတှရေဲ့ စကားအတိုငျးနတေဲ့ ခပျတုံးတုံး သမီးပေါ့… မထငျမှတျဘဲ ဘုရငျ့သားကိုကွိုကျမိပွီး အာဏာလုပှဲမှာ ဒီမငျးသားကို နနျးတငျပေးခဲ့ပွီး သူကိုယျတိုငျ ဧကရီ ဖွဈခဲ့ရငျးကနေ နောကျဆုံး သူ့အိမျတျောက မိသားစုတှေ အကုနျလုံးကို သတျ၊ သူ့ကိုပါ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ သတျသဖေို့ ဖိအားပေးခံရရငျး သူ့အသကျနဲ့ရငျးပွီး ခဈြရတဲ့ ဘုရငျကို စိတျနာ၊ နောကျကြောကို ဓားနဲ့ထိုးခဲ့ကွတဲ့ အဈမ ဝမျးကှဲတှကေို နာကညျြးပွီး သဆေုံးသှားခဲ့တဲ့ မိနျးကလေး… သဆေုံးသှားပွီးကာမှ ကံကွမ်မာအလှညျ့အပွောငျးနဲ့ ဒီဖွဈရပျတှေ မဖွဈသေးခငျ အခြိနျလေးမှာ ပွနျဝငျစားမိတဲ့အခါ သူဘယျလို လကျစားခမြေလဲ၊ သူ့ကံကွမ်မာကို ဘယျလိုပွောငျးလဲမလဲဆိုတာလေးပါ.. ပလနျခတြာလေးတှကေ အတျောစိတျဝငျစားစရာ ကောငျးတယျ။
ဒါကတြော့ ဝတ်ထုဖတျနရေငျး တနျးလနျးကနေ ဖတျနတေဲ့ ဝတ်ထုထဲ ရောကျသှားပွီး ကိုယျက ဗီလိနျဖွဈနလေို့ မသအေောငျ ကွိုးစားရတဲ့ ကောငျမလေး.. ကှကိုယျ မသအေောငျ ကွိုးစားရငျး ဇာတျလိုကျမငျးသမီးကို ကွိုကျရမယျ့ ဇာတျကောငျတှေ ဇာတျလိုကျနဲ့ ဒုတိယမငျးသား၊ နောကျ တခွား ဝတ်ထုထဲမှာ ခဏလေးပဲ ပါတဲ့ ဇာတျကောငျတှကေပါ သူ့ကို အတညျကွိုကျလာတဲ့အခါ… အယျလယျ.. ဒါမြိုးပေါ့.. ဆိုးတော့ မဆိုးပါဘူးရယျ.. (သိပျမကွိုကျပမေဲ့လညျး ခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ ဇာတျလမျးလေးမို့)
Related Article >>> ကမ်ဘာကြျော နာမညျကွီး ဟယျရီပျေါတာ ရုပျရှငျတှကေ မူရငျးဝတ်ထုတှနေဲ့ ဘာကှာသှားလဲ?
ဒါကကတြော့ ဒီဘကျခတျေက အဆိပျမှာ အရမျးကြှမျးကငျြတဲ့ ဆရာဝနျမလေးက ဟိုဘကျခတျေကို ရောကျသှားတာပေါ့နျော… သူ့ဝိဉာဉျဝငျသှားတဲ့ ကောငျမလေးရဲ့ အိမျက အတျောဆုံးဆိုတဲ့ သမားတျောကွီးရဲ့ အိမျတျောပမေဲ့ သူကကတြော့ ဘာမှမသိ၊ ဘာမှမတတျ ၊ မကျြနှာမှာ ရုပျဆိုးတဲ့ ဒဏျရာကွီးနဲ့ မိနျးကလေး.. ဆရာဝနျမလေး အဲဒီကို ရောကျသှားတဲ့အခြိနျမှာ ရုပျဆိုးမလေးက မင်ျဂလာဝေါထဲ ရောကျနပွေီ..
တကယျ့တကယျ အဲဒီကောငျမလေး မကျြနှာက ဒဏျရာက အဆိပျကွောငျ့ဖွဈနတောမြိုး.. ကုလို့ ပြောကျနိုငျတယျဆိုပမေဲ့ မူရငျး ခန်ဓာကိုယျပိုငျရှငျက ဘာဆေးပညာ၊ အဆိပျပညာမှ မတတျဘူးဆိုတော့ မကုခဲ့ဘူး ဖွဈနတော.. ခု ဝိဉာဉျအသဈကကတြော့ အဆိပျပညာမှာ ဆရာတဈဆူဆိုတော့ ဝေါထဲမှာတငျ ကုလိုကျတာ ပြောကျသှားရော :3 နောကျထပျ သူရှဆေ့ကျရမယျ့ လမျးမှာလညျး ရနျသူပေါငျး သောငျးခွောကျထောငျဆိုတော့ သူဘယျလို ဆကျပွီး ရငျဆိုငျမလဲ၊ သူ့ရဲ့ အဆိပျပညာက သူ့အတှကျ အထောကျအကူဖွဈလာမလား၊ ကံဆိုးမှုတှကေို ရငျဆိုငျရမလား ဆိုတာတော့…. ဖတျကွညျ့ပေါ့နျော 😀 ဒီဝတ်ထုဆို ဒရာမာပါ ထှကျထားပွီးသား.. “Legend of Yun Xi” ဆိုတဲ့ နာမညျနဲ့ ရှာကွညျ့လို့ ရပါတယျလို့…
ဒီဝတ်ထုတှကေို အင်ျဂလိပျလို ဖတျခငျြတယျဆိုရငျ Wattpad မှာ ဒီနာမညျတှနေဲ့ ရှာကွညျ့လို့ရသလို Google မှာလညျး ရိုကျရှာလို့ ရပါတယျနျော.. မွနျမာလိုလညျး Wattpad မှာ Arc အလိုကျ ဘာသာပွနျထားပေးတာတှေ ရှိပါတယျ။ Link ပေးဖို့ကတြော့ Wattpad မှာ မွနျမာလို ဘာသာပွနျထားတာတှကေ Arc အလိုကျဆိုတော့ ပေးရခကျလို့ပါ.. တခြို့ဆို အကျဒျမငျတောငျ ရှာမရဘူး ဟီးဟီး.. ဖွဈနိုငျရငျတော့ အင်ျဂလိပျလို ဖတျစခေငျြတယျ ယောငျးတို့ရေ… ကိုယျစိတျဝငျစားတာကို ဖတျကွညျ့ရငျးနဲ့ ဖတျကငျြ့ရသှားသလို အင်ျဂလိပျစာလညျး ကောငျးလာတာပေါ့နျော..
ခု အကျဒျမငျပွောပွသှားတဲ့ ဝတ်ထုတှအေကုနျလုံး Normal တှခေညျြးပါပဲနျော.. တကယျလို့ BL လေးတှေ ဖတျခငျြတယျဆိုရငျေတာ့ ကှနျမနျ့မှာ လာတောငျးကွပါလို့.. နောကျထပျဆောငျးပါးတဈပုဒျနဲ့ ပွောပွပေးပါ့မယျလို့ဈ… မှခြိနျော..
Tags: #romance, App, Book review, drama, Knowledge, normal, Read, Wattpad
ငွေ ၅၀၀၀၀ ဝန်းကျင်နဲ့ မိတ်ကပ်ပစ္စည်းအစုံ အက်ဒ်မင်ဘယ်လိုဝယ်လဲ ?
Wathun December 21, 2018